Indawo eyimfihlo, ethokomele - I-Airbnb
Indawo eyimfihlo, ethokomele
Molalla, Oregon, i-United States
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Jason
Igumbi lezivakashi elinethezekile, elithokomele endaweni ethule. Le suite yangasese inesango layo lokungena kanye nevulandi elinetafula nezihlalo. Jabulela i-Wi-Fi yamahhala kanye neziko elithokomele ngemva kosuku lokuhlola noma ukuhlala nje.
Woza ujabulele lokho indawo ye-Molalla engakuhlinzeka kusukela ekuqwaleni izintaba, i-paintball, i-skydiving, izitolo zewayini, ukuya ekuhloleni i-Molalla River Corridor!
Isikhala sakho sihlanganisa umbhede omkhulu, i-Wi-Fi yamahhala, isiphephetha-moya, indawo yomlilo, i-TV engu-42 in., isiqandisi esincane, i-microwave, nomakhi wekhofi. Jabulela ikhofi lakho lasekuseni, itiye noma amanzi endaweni yakho yangasese. Indlu yokugezela inamathawula engeziwe, nezinto ezibalulekile. Uma uthola ukuthi ukhohlwe ukupakisha okuthile ungangabazi ukusazisa.
I-Molalla inezindawo ongazihlola unyaka wonke: ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngesikebhe, i-kayaking, ukunambitha iwayini, i-skydiving, igalofu, ukushushuluza, nokudoba. Kuwuhambo olufushane oluya eMt. Hood, eMolalla River Corridor, e-Oregon Gardens, ePortland naseSalem.
Ukungena ngaphandle kokuthinta kuyasetshenziswa. Uzothola ulwazi olubalulekile ngaphambi kokuhlala kwakho. Indawo yokupaka iyindawo yokupaka emgwaqweni ngaphambi kwendawo yokuhlala.
Hlola ezinye izinketho ezise- Molalla namaphethelo